Lalao Ravalomanana : nahazo tso-drano amin’ny fikasana tsara ataony – MyDago.com aime Madagascar
Tonga nanatrika ny vavaka famaranana ny isan-kerin-taonan’ny Sampana SPFVA, ao anatin’ny Synodamparitany Faritany Voalohany Antsiranana ny vadin’ny Filoha mpanampy, Ramatoa Lalao Ravalomanana. Tao amin’ny fitandremana FJKM SCAMA Famonjena no natao ny fotoam-pivavahana lehibe notarihan’ny mpitandrina sady Président Synodaly Rabevita Saina tamin’ity Alahady 16 Jona 2013 ity. Ny lohahevitra nobanjinina tramin’izany dia hoe « Sampana manana Fanantena dia manaiky Irahin’ny Tompo ».Ny Bokin’ny EZEK 20.39-44 sy ny JAO. 20.21-23 ary ny 2KOR. 10.1-11 no nitondran’ny mpitandrina ny hafatra. Mila mitory ny famelan-keloka ny fiangonana mba hahazahoan’ny mpino famelankeloka avy amin’ny Tompo, fa raha tsy manao izany asany izany izy dia hifindra aminy ny tsy fahazahoana famelankeloka.
Amin’ny maha vadin’ny filoha mpanampy ny FJKM no nahatongavan-dRamatoa Lalao Ravalomanana teto , ary nitondrany ny hafatra ho an’ny mpino. Nandritra ny efa taona izay no tsy naha teto ahy kanefa mbola vonona amin’ny asa fanompoana aho. Misaotra antsika rehetra tamin’ny fitrotroaam-bavaka anay mianakavy hoy izy. Na dia teo aza ny fitsapana nisy teo aminay mianankavy sy ny fiangonana dia mbola mijoro amin’ny finoana isika, ny fizahan-toetra amin’ny finoana dia mahatonga faharetana, ary ny faharetana sy ny asa no tanterahana. Ankehitriny, amin’ny vanim-potoana hijoroantsika Kristiana ho vavolombelona sy fanasina ary fahazavana eto amin’ny firenena izao dia hiara-hientana isika haneho amin’ny alalan’ny asa ny finoantsika. Raisiko ho eny faneva hoy i Neny ny tenin’ny Mika 6 -8 manao hoe : « ry olombelona efa nasehonao izay tsara sy ilain’I Jehovah aminao dia izao ihany, ny hanao ny marina, ho tia famindram-po ary hanaraka ny Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena. »
Niavaka ihany koa ny ity fanompoam-pivavahana ity satria dia nitondrana fiarahabana sy fanomeza ireo raim-pianakaviana nanotro tao, tsy adinon’ny mpitandrina ihany koa ny nampita izany fiarahabana noho ny fetin’ny ray ho an’i Dada any Afrikatsimo.
Taorian’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo no nitondran’ny filoha sinodaly ny tso-drano hoan’ny Ramatoa Lalao Ravalomanana. « Mitso-drano anao izahay amin’ny fikasana tsara ataonao, Andriamanitry ny fiadanana anie homba anao mandrakariva » hoy ny mpitandrina.
Lalao Ravalomanana : Tsy ataony ambanin-javatra mihitsy ny fiangonana
Auteur Solo Razafy*Publié le 16 juin 2013 16 juin 2013 Catégories Politique
1 réflexion sur « Lalao Ravalomanana : nahazo tso-drano amin’ny fikasana tsara ataony »
Aoka tsy hivadi-dalana fa Andriamanitra tsy azo vazivazina.
Précédent Article précédent : Lalao Ravalomanana : ankafizin’ny vahoakan’Antsohihy
Suivant Article suivant : Ankolafy Ravalomanana Antsiranana : vonona hampandany an’i Neny 1er tour dia Vita